Orinasa kafe latabatra - mpanamboatra latabatra kafe any Sina, mpamatsy
Ny latabatra kafe any ambony dia manolotra antsika zavatra sarobidy indrindra sy matetika tsy jerena: io fitehirizana kely io izay matetika mahatonga ny fahasamihafana rehetra. Iray amin'ireo antony itiavan'ny latabatra kafe misy talantalana sy cubbies ao anaty trano izy io ary ankasitrahana tokoa.
Tehirizo lavitra ny mason'ny vahininao ny entanao raha manome ny efitrano fandraisam-bahinao afovoany ambanivohitra izay hitazona ny habakao tsy hisavoritaka. Miaraka amin'ny latabatra fisaka kafe avo lenta avoakanay izay manaitra, ny fitehirizana ny efitranonao dia tsy hitovy velively.
Natao ho an'ny minimalist izay mila fitehirizana faran'izay betsaka, ity latabatra fisakafoanana misy ankehitriny ity dia mety amin'ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra. Vita amin'ny lacquer fotsy manjelanjelatra, ny tsipika madio madio dia ampiarahina amin'ny krônaly voadio maoderina. Tian'ny mpamorona ny tampony mora entina.
Ity latabatra fisaka fotsy ambony ambony ity dia manambatra ny fahafinaretana sy ny fahaizan'ny olona miasa. Manasongadina haavon'ny haavo azo ovaina izay manome ny hahavony tonga lafatra ho anao rehefa miasa na misotro kafe iray kapoaka ianao, ary ny fitahirizana miafina ao ambanin'ny latabatra ambony sy ny toerana fitahirizana eo ambanin'ny tampon'ny latabatra izay mahatonga ity sombin-javatra mahafinaritra ity ho mendrika ihany koa. manana!
Tabilao fisotroana kafe avo lenta an'ny YF-2001 izay manaitra anao amin'ny fomba mety indrindra
Mifanaraka amin'ny anarany, ny latabatra kafe misy aingam-panahy tamin'ny tapaky ny taonjato dia manasongadina tampon-tampon-kavoana hanehoana toerana fitahirizana miafina. Ny famaranana ny varimbazaha dia ampamenoin'ny ravina marbra ho an'ny fitoeram-panangonana fanampiny - mety tsara amin'ny fitehirizana boky mandritra ny fiarahan-dry zareo manaraka.